Items 1 to 16 of6total
တံခါးတွင် လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်မယ့် Iron Gym လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ဒိုက်ထိုးခြင်း၊ အိပ်ထမတ်တင်နဲ. Gym ကစားနည်းမျိုးစုံ ကစားနိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းပုံကို Video လေး ကြည့်ပေးပါ။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/865900816881571/ ဈေးနှုန်း - 18000 kyats Deliver free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Wonder Patch အဆီကျ ကပ်ခွာလေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ တစ်ထုတ်မှာ ၅ချပ် ပါပါမည်။ လူတစ်ယောက်ကို ၃ထုပ် ၁၅ချပ် အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁ရက်ခြား ကပ်ရင် ၁လစာ နေ.တိုင်း ကပ်ရင် ၁၅ရက်စာ တစ်နေ. တစ်ကြိမ်သာ ကပ်ပေးပါ။ တစ်ခါကပ်ရင် ၁၂နာရီ ကပ်ပေးဖို. လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချိုးပြီးမှ ကပ်ပေးပါ။ ဗိုက်၊ လက်မောင်း၊ ပေါင်နဲ. တခြား အဆီကျချင်သော နေရာများကို Video အတိုင်း ကပ်ပေးလို. ရပါတယ်နော်။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/868055676666085/ ဈေးနှုန်း တစ်ထုပ် - 7000 kyats သုံးထုပ် - 15000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Yoga ကျင့်ရန်အတွက် ဖျာ ကြီးကြီး မကြိုက်သူများအတွက် ဖျာ အသေးကို Rocket တွင် ရရှိနိုင်ပါပြီ။ Length:177cm/69.69&#039;&#039; in length အထူက 5mm ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့ပြီး အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။ ပေါ့ပါးတဲ့အတွက် သွားလေရာ သယ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်သော အရောင်များ အပြာရောင် ခရမ်းနုရောင် ပန်းရောင် ဈေးနှုန်း - 17000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ချွေးထွက်ပြီး လှပစေဖို. Hot Belt Power လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ အသားလေးလည်း ကောင်းပြီး ဝတ်ရ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Miss belt လို အသား မကြမ်းဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာကို ချွေးထွက်စေကာ အားကစားလုပ်သူများ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူများ၊ လမ်းလျောက် ဝိတ်ချသူများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Size small = ခါး 97 အောက် Medium = ခါး 103 အောက် Large = ခါး 108 အောက် XL = ခါး 114 အောက် 2XL = ခါး 118 အောက် 3XL = ခါး 118 အထက် ဈေးနှုန်း တလုံး 15000 Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
The series of Walker - လမ်းလျှောက်စက်များ
အားကစားလုပ်ချင်သော လူကြီးမင်းများအတွက် The series of Walker လမ်းလျှောက်စက်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည် ၁။ လမ်းလျှောက်၊အပြေးကစားနည်း ၂။ ဗိုက်အဆီချစက် (မော်တာ) ၃။ အိပ်ထမတင်ကစားနည်း ၄။ ခါးလှည့်လေ့ကျင့်ခန်းကစားနည်း ၅။ လက်မောင်းကြိုးဆွဲကစားနည်း ၆။ ဒိုက်ထိုးကစားနည်း (ပြေးလမ်းအနိမ့်အမြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အားကစားနည်း (၆)မျိုး၊ (၄)မျိုး၊ (၃)မျိုး ဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ အာကစားပစ္စည်းများကို မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းတွင် ၂ဝ၁၂ နိုင်ဝင်ဘာ၇ရက်တွင်စတင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အားကစားဝတ်စုံ၊ပစ္စည်းမျိူးစုံနှင့် အားကစားစက်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
The series of Sit-up Bench အိပ်ထမတင်ခုံများ
အဆီပိုရှိသူများ ဗိုက်သားလှပလိုသော သူများအတွက် အသုံးပြုရတာလွယ်ကူသော အိပ်ထမတင်ခုံများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ အမျိုးအမီးနှင့် အမျိုးသားများပါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သိမ်းရတာလွယ်ကူပြီး နေရာမယူသည့် ပစ္စည်းလည်းဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းဖြစ်သော အသုံးပြုသည့် Caustomer များအနေဖြင့် စိတ်ချမ်းသာမှုရရှိမည်ဖြစ်သည်။